Vaviri vanofamba vanochengetedza hupenyu hwavo nekuda kweApple Watch | Ndinobva mac
Vaviri vanofamba vanochengetedza hupenyu hwavo nekuda kweApple Watch
Isu tinoenderera mberi nenhau dzakanangana zvakananga nemabasa eApple Watch uye kunyanya izvo zvine chekuita nekuonekwa kwekuwa. Mune ino kesi kudonha kwaive kwakakosha chaizvo uye isu tiri kutaura nezve tsaona mumakomo apo Varume vaviri vanobva kuNew Jersey vaifamba netsoka ndokudonha pamawere.
Mumwe wavo akatyoka musana uye mumwe akawira murwizi. Chaizvoizvo iyi mhando yenhau ndidzo dzinoita kuti tione kukosha kwekuve neApple Watch mumamiriro ekukurumidzira uye ayo anotinyatsoita isu kukura kubva pakupedzisira uye kunyangwe zvakakomba, zvese zvakapera mushe kune protagonists ndinotenda zvikuru muchikamu cheApple Watch.
Kuonekwa kweApple Watch kudonha kwakadzimwa nekutadza ... kunze kwekunge iwe wakura
Isu tatoona mune yekupedzisira Apple kiyi yakakosha zviitiko zvinoverengeka umo vashandisi vakabatsirwa chaizvo neApple Watch yavo uye mune ino kesi Business Insider inotsanangura nhau nyowani nezve kunakidza kwazvinoita kupfeka Apple Watch pachiuno chako. Mune ino kesi Series 4 modhi iyo akaita runhare rwekukurumidzira kuna 911 achiratidza chinzvimbo chevakakuvadzwa uye kutora zvikwata zvekununura kuti zviuye nenguva.
Kupfupisa zvishoma zvakaitika mune iyi kesi, isu tinokuudza iwe kuti vanofamba-famba James Prudenciano naPaige Paruso, vakaita nzendo pedyo neRwizi Navesink uye pakupedzisira vakawira mukati maro kana husiku hwawa. Akamiswa zvakanyanya ndiPrudenciano, nekuti akatyoka musana uye Paruso akakuvara zvishoma mushure mekudonha. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha ndechekuti wachi iyo pachayo yakaona kudonha uye ndokufamba nenzira yekufonera emergency emergency kubatsira kuvatsvaga. Chiitiko ichi chaityisa sekutaura kunoita James pachake, asi pakupedzisira vese vakanunurwa mushure metsaona uye vari kupora zvakanaka kubva mukukuvara kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vaviri vanofamba vanochengetedza hupenyu hwavo nekuda kweApple Watch
Ita zvakanyanya kuvandudzwa mune macOS Catalina manotsi